रातो खाम: December 2009
विश्व-ईतिहास परिवर्तनको शृङ्खलामा रुमल्लिरहँदा क्रान्ति शब्द छिनभरको जोष र आवेगमा सीमित भएको छ । क्रान्तिलाई हिंसासँग जोडेर, रगत र रातो रङ्को आलिङ्गनमा मानव-समाज छद्म-क्रान्तिकारी बन्दैछ।
"मानव-क्रान्ति कहिल्यै निस्वार्थी हुन सकेन, र जुन मानिसले सच्चा क्रान्ति गर्यो, मानिसले उसलाई बुद्ध भन्दै मूर्तिभित्र लुकाए, चे ग्वेभारा भन्दै पोस्टर, कमिजमा कहिल्यै नझर्नेगरि चिप्काईदिए... "
युद्धनै क्रान्ति र क्रान्तिनै युद्ध भन्ने मानसिकताले भूमि रगतले लट्पटिएको छ। तर बिडम्बना मानिसले त्यहि रगतको पनि बर्गीकरण गर्छ। रगत अरुको बग्दा लाशलाई महान्, शहिद, र क्रान्तिकारी भन्दै आँखामा अझबढि तेज र जोष प्रज्वलित हुन्छ; तर त्यहि संघर्षमा परिवारको कोहि रक्तियो भने क्रान्तिकारी आँखाबाट भेल बग्न थाल्दछन्। के क्रान्ति भनेको यहि हो ? यदि क्रान्ति यहि हो भने चे ग्वेभारा, वुद्ध बाहेक सम्पुर्ण मानवजातिनै क्रान्तिकारी हो, किनकी प्रत्येक मान्छे कुनै न कुनै विन्दुमा स्वा्र्थी हिँसामा संलग्न भएकै हुन्छ।
"क्रान्ति चाहियो चैं किन त ?" भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजी क्रान्तिमा होमिने मानिस ईतिहासको परालमा सियो जसरी बिलाउँछ। र अवोध क्रान्तिकारीको त्याग टाठाबाठाको लुटिखाने मेसो बन्छ। यही प्रवृति यो युगको बर्बादीको कारक हो। क्रान्तिकारी धेरै हुर्किए तर क्रान्तिको बोट नऊम्रिदै ओइलायो। बोली र छद्म-धर्ममा क्रान्ति धेरै फस्टायो, तर कर्ममा क्रान्ति फस्टाएन।मानव-क्रान्ति कहिल्यै निस्वार्थी हुन सकेन, र जुन मानिसले सच्चा क्रान्ति गर्यो, मानिसले उसलाई बुद्ध भन्दै मूर्तिभित्र लुकाए, चे ग्वेभारा भन्दै पोस्टर, कमिजमा कहिल्यै नझर्नेगरि चिप्काईदिए...
Article of the Day eShan at 7:10 AM0comments
अस्ति साथीले देखाउँदात म पनि आकुल-व्याकुल भा'को थिएँ उसलाई भेट्न। साथीलाई नै कुरा गर्दे भनें; कुरा मिल्यो, ऊ मानी, उसको मनको करेन्टले मेरो नशामा ३० मेगावाटको पावर हान्ने झल्को पाएँ। तर मोरी बाठी चैं सार्है रैछे- तीँ तलतिरको ठूलो घरमा हुर्के-बढेकि त्यो यति छट्टू छे भन्ने कुरो मैले यतिन्जेलसम्म चाल पनि पाइनँ। मैले पठाको मुस्कानको खोलोलाई, जन्तर-मन्तर गरेर मैतिर ३० मेगावाटको भेल नै पठाई बा! म त छक्क परेँ!
"यति सम्मकि मोरीको गाउँ पुगेसि यताका मैयाहरु भैयाप्रिय, आनि लाठेहरु नाथे भएर फर्किन्छन्।
उसमाथि भाऊ खोज्छे यार- बार्गेन गरि गरि मेरै घरको गोलभेँडाको सस् बनाएर मलाई नै बेच्छे।
हुन त त्यो एकजना मात्र बाठी होइन। त्यसको वंश, छर-छिमेक, गाउँ नै छक्का-पन्जा छ। त्यसको गाउँको मुखियाले हाम्रो गाउँका गन्य-मान्य टाठाबाठालाई जिल्याको देख्दा म आफैं जिल्ल पर्छु। यता भाटा देखाउँदै हिँड्नेहरु उता पुगेसि लाटा भा'को देख्दा त कहिलेकाहिँ मज्जा पनि आउँछ। यति सम्मकि मोरीको गाउँ पुगेसि यताका मैयाहरु भैयाप्रिय, आनि लाठेहरु नाथे भएर फर्किन्छन्।
तर यति हुँदाहुँदै पनि मलाई त्यै मोरीको मात लागेको छ; माथिल्लो गाउँकि नेप्टि पनि कम खाईलाग्दि त छैन, तर पनि यसैले लठ्याकिछे मलाई। यसैबिचमा मेरो मन गुन्गुनाउँछ,
गोरी होइन, यो मोरी काली छे
सोझी होइन, सार्है नै जाली छे
ममाथि मायाजाल नै फाली छे
मलाई डुबाउन थालिछे
Article of the Day eShan at 7:08 AM 1 comments
Article of the Day eShan at 6:39 AM0comments
Article of the Day eShan at 4:12 AM0comments
Article of the Day eShan at 4:10 AM 1 comments
Article of the Day eShan at 4:08 AM0comments
Article of the Day eShan at 4:07 AM2comments
Article of the Day eShan at 4:04 AM0comments
Article of the Day eShan at 4:00 AM0comments